Wafti Ka Socda Deeqbixiyaasha oo Booqday Wakaaladaha Biyaha iyo Wadooyinka +SAWIRO. |
Wafti Ka Socda Deeqbixiyaasha oo Booqday Wakaaladaha Biyaha iyo Wadooyinka +SAWIRO.
Hargeisa (GNN)- Wefti ka kooban dawladda Somaliland oo ay wehelinayaan qaadhaan bixiyayaasha Sanduuqa Horumarinta Somaliland (SDF) ayaa booqday Xarunta uu ku yaallo Shaybaadhka Tayada Waddooyinka ee ay leedahay Wakaaladda Horumarinta Waddooyinka Somaliland (RDA) taas oo uu maalgeliyay Sanduuqa Horumarinta Somaliland. Kadibna, waxay waftigu booqasho ku tageen xarunta kaydka dhuumaha biyaha qaada (beebabka) ee duleedka magaalada Hargeysa, halkaas oo ay yaalaan beebabka loogu talo galay Mashruuca Biyo Ballaadhinta Magaalada Hargeysa.
Ujeedada booqashada waftiga ayaa ahayd sidii ay u soo kormeeri lahaayeen qalabka Shaybaadhka Tayada Waddooyinka oo dhowaan lagu rakibay qayb ka mid ah dhismaha Wakaaladda Horumarinta Waddooyinka iyo sidoo kale 371 konteenar oo ay ku jiraan beebabka biyaha ee dhowaan dalka la keenay, kuwaas oo ay ku jiraan 3,696 midh oo cabbirka dhumucdoodu tahay 600 mm, lana dhigi doono in in ka badan 21 KM, si loogu isticmaalo ballaadhinta iyo fidinta beebaka Magaalada Hargeysa biyaha u qaada. 124 konteenar oo dheeraad ah oo ay ku jiraan beebab, dhuumo iyo qalab kale ayaa la filayaa inay yimaadaan bisha socota. Qalabka shaybaadhka iyo beebabka labadabada waxa maalgeliyay Sanduuqa Horumarinta Somaliland (SDF).
Dhanka wefitga xukuumadda Somaliland ka socday waxa ka mid ahaa Wasiirul dawlaha Wasaaradda Maaliyadda, Mudane Cismaan Saxardiid iyo Maareeyaha Wakaaladda Biyaha Hargeysa Mudane Ibraahim Siyaad, halka qaadhaan bixiyayaashana ay ka socdeen masuuliyiin ka tirsan Waaxda Horumarinta Caalamiga ah ee Boqortooyada Ingiriiska (DFID), Hay’adda Horumarinta Caalamiga ah ee Denmark (DANIDA) iyo Boqortooyada Netherlands. Safaaradda Norway uma ay suurto gelin inay waftiga ka mid noqdaan waxayna soo direen codsi maqnaansho ah.
Madaxa Kooxda Dhaqalaha IYo Horu Marinta Aadamaha Ee DFID Pauline Seenan oo u hadashay waftiga qaadhaan bixiyayaasha ayaa tidhi sidatan: “Aad bay u wanaagsantahay inaan halkan idinla joogo si aan u arko maxsuulka shaqada laba sannadood. Sanduuqa Horumarinta Somaliland (SDF) run ahaantii wuxu diiradda saaray dhismayaasha gaar ahaanna dhanka waddooyinka. Waxaynu haynaa laba waddo oo la dayactiray iyo biriish, sidoo kalena aad bay u fiicantahay in la arko qalabkan oo dhan oo wax ka tari doona hubinta iyo tijaabinta tayada waddooyinka. Lacagta qaadhaan bixiyayaasha ee Cashuur bixiyayaashu waxa loo isticmaalay si hufan oo raandhiis leh, sidaas darted way fiicantahay in la arko dhamaan arrimahan oo rumoobaya ugu danbayntii.””
Sidoo kale, Wasiirul dawlaha Wasaaradda Maaliyadda, Mudane Cismaan Saxardiid oo isaguna dhanka waftiga dawladda u hadlay ayaa yidhi: “Dawladda Somaliland iyo dhammaanteenba waa inoo muuqataa horumarka laga sameeyey waddooyinka gaar ahaa qalabka shaybaadhka oo wax weyn ka tari doona tijaabinta iyo shaybaadhista agabka waddooyinka oo berigii hore debedda loogu tagi jiray. Mashruuca biyahu sidoo kale waa mid faa’ido badan leh oo wax ka taraya helidda biyo badan oo Hargeysi hesho”
Sanduuqa Horumarinta Somaliland (SDF) waxa uu u qoondeeyey lacag dhan 9,928,630 Dollar Wakaaladda Horumarinta Waddooyinka (RDA) si loogu dayactiro waddooyinka isku xidha Lafaruug-Berbera- Sheikh iyo sidoo kale waddada isku xidha Kalabaydh iyo Dilla. Qayb ka mid ah lacagtan ayaa lagu soo iibiyay qalabka Shaybaadhka Tayada Waddooyinka kaas oo kordhin doona awoodda hubinta qalabka lagu dhiso waddooyinka kuwa la dayactirayo iyo kuwa cusub labadaba.
Si la mid ahna waxa Sanduuqa Horumarinta Somaliland (SDF) u qoondeeyey lacag dhan 9,503,000 Dollar kor u qaadida iyo ballaadhinta nidaamka Biyaha Magaalada Hargeysa, gaar ahaan keenidda qalabka beebaka oo la dhigayo 23 KM oo ah inta u dhexeysa Xarunta Biyo Tuuridda Geed Deeble illaa Xarunta Kaydka Biyaha ee Shiinaha. Sidoo kale waxa ku jirta 3 ceel biyood oo laga qodayo deegaanka Hora Hadley iyo weliba hirgelinta 6.8 Km oo beebab cusub ah oo la dhigayo Inta u dhexaysa ceelasha Hora Hadley iyo Geed Deeble. Waxa kale oo magaalada Darasalaam loo samaynayaa nidaam biyeed kooban, halka beebab kalena lagu kordhinayo nidaamka Biyo Qabashada ee Geed Deeble kaas oo ceelasha cusub iyo kuwa hore u jiray ku xidhaya xarunta Biyo Tuuridda. Shaqadan waxa qabanaysa Hay’adda Qaramada Midoobay ee UN-Habitat. Lacagta kor ku xusan waxa kale oo ku jira qayb loo qoondeeyey dhisidda iyo fulinta nidaamka biyo helidda ee xaafadaha Ayaxa 1&2 ee Magaalada Hargeysa kaas oo ay fulinayo ururka Terre Solidali.
Sanduuqa Horumarinta Somaliland waa deeq lacageed oo loogu talagalay in lagu caawiyo Dawaladda Somaliland;kaas oo socon doona muddo afar sano ah, looguna talo galayay inuu Dawladda Somaliland ka taageero hirgelinta qorshaha horumarinta Somaliland (NDP). Sanduuqa waxa maalagalinaya Hay’adda Horumarinta Caalamiga ah u qaabilsan dawalda Ingiriiska (DFID), Hay’adda Horumarinta Caalamiga ah u qaabilsan dalka Denmark (DANIDA), dawladaha Norway iyo Netherlands.